आहा ! कति रमाइलो खप्तड – श्वेतपत्र
आहा ! कति रमाइलो खप्तड
कोरोना भाइरस : इटालीमा आफन्तले मृतकलाई अन्तिम विदाई गर्न पाउँदैनन्
अब खाद्यन्न घरमै डेलिभरी हुने, यी हुन् सरकारका १२ निर्णय
नेपालमै दैनिक ७० हजार मास्क उत्पादन (हेर्नुस् भिडियो)
पुरै इन्डिया लकडाउन, मोदीले भने, ‘कर्फ्यु सम्झनुस्’
इटालीको दुखान्त कथा नेपालमा नदोहोरियोस्
एलओडी : जब ‘रक बार’ एक्कासी ‘डिस्को’मा परिवर्तन हुन्छ !
हाईप्रोफाइलका ‘बिजुली कार’
लाहुरे हुने मोह त्यागेर बैंकर बनेका अशोक शेरचनको कथा, भन्छन् अब राजनीति गर्छु
ठूलो लगानीका नमुना कृषि उद्यम
थपिँदै डेढ दर्जन पाँचतारे होटल
गगन थापाको प्रधानमन्त्रीलाई खुलापत्र : कोरोनाको संकटबाट जोगिन सरकारको तयारी पुगेन
किन खुल्नुपर्छ निकुञ्जभित्रका होटल ?
देश धनी छ, जनता गरीव किन ?
किन चित्त दुखाए शेर्पाले ?
विजनेश गुरू विनोद चौधरीको व्यवस्थापनका शिष्यहरूलाई दिक्षा
वाह ! हब लुम्बिनी
मन लोभ्याउने घान्द्रुक
१५० किलोको चरो
भिडियोमा हेर्नुहोस् भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
यस्तो बन्दैछ धरहरा
खप्तड प्राकृतिक सौन्दर्यको खानी हो। र, खप्तड बाबाले तपस्या गरेको पवित्र ठाउँ पनि । यसैले धार्मिक आस्था राख्नेहरु मात्र होइन, प्रकृतिसँग रमाउन खोज्नेका लागि पनि खप्तड गतिलो गन्तव्य हो।
वरिपरी विशाल घाँसे मैदान, रंगिविरंगी फूलहरु । पृष्ठभूमिमा देखिने सेताम्मे हिमाल । आहा ! कति सुन्दर, शान्त र रमणिय । खप्तड प्राकृतिक सौन्दर्यताको खानी हो । र, एक पटक पुग्नैपर्ने गन्तव्य पनि । यसलाई धर्तीको स्वर्गको उपमा पनि दिइएको छ ।
यो ५० वर्षअघि खप्तड बाबाले तपस्या गरेको पवित्र ठाउँ हो । धार्मिक आस्था राख्नेहरु मात्र होइन, प्रकृतिसँग रमाउन खोज्नेका लागि पनि गतिलो गन्तव्य हो । बझाङ, बाजुरा, डोटी र अछाम जिल्लाको संगमस्थलका रुपमा रहेको खप्तडमा २२ वटा घाँसे मैदान अर्थात पाटन छन् । घाँसे मैदान चित्ताकर्षक छन् ।
खप्तडको वरिपरी ५३ वटा थुम्काहरु छन्, जसलाई स्थानिय भाषामा झोती भनिन्छ । यहाँ खप्तड बाबाको मन्दिर छ । प्रत्येक वर्षको जेष्ठ पूर्णिमामा भव्य मेला लाग्ने गर्छ । मेला भर्न छिमेकी ९ जिल्लाका भक्तालु आउँछन् । रातभर जाग्राम बस्छन् । यहाँको त्रिवेणीमा नुहाए पाप पखालिने जनविश्वास छ ।
यहाँको खप्तड दह पनि उत्तिकै आकर्षक छ । खप्तड बाह्रै महिना घुम्न सकिन्छ । तर, पर्यटकीय पूर्वाधार छैनन् । सडकदेखि खाने बस्ने सुविधा राम्रो छैन । खप्तडमा ५० जनासम्मका लागि आवास र खाने सुविधा छ । हिउँदमा जाँदा खप्तडमा हिउँले ढाकेको हुन्छ । चैत, बैशाखमा रंगीविरंगी लालीगुराँस फुलेको देख्न पाइन्छ ।
पर्यटन व्यवसायीले खप्तड घुमाउने विभिन्न प्याकेज बनाइरहेका छन् । शुक्लाफाँटा जंगल कटेजका सञ्चालक प्रमानन्द भन्डारीले शुक्लाफाँटादेखि खप्तड हुँदै रारासम्म जोड्ने प्याकेज बनाइरहेका छन् । यो यात्रा सिध्याउन १४ दिनसम्म लाग्छ ।
खप्तडमा बझाङको तमैल र डोटीको झिंग्रानबाट जान सकिन्छ । बझाङको बाटो भएर जान धनगढीबाट तमैलसम्म ९ घण्टा बसमा हिँड्नुपर्छ । तमैलबाट लामातोलासम्म लोकल जीप पाइन्छ । करीव ४५ मिनेटको जीप यात्रामा लामातोला पुगिन्छ । लामातोलाबाट ४ घण्टामा खप्तडको बेसक्याम्प लोखाडा पुगिन्छ । र, त्यहाँबाट २ घण्टामा खप्तडका घाँसे मैदान र क्याम्प साइटसम्म पुग्न सकिन्छ । उकालो बाटो ४ घन्टा हिँडेपछि खप्तड लेख पुग्न सकिन्छ ।
खप्तड लेक पुगिसक्दा पुरै थकित भइन्छ । तर, त्यहाँ देखिने हरिया फाँट र पृष्ठभूमिका हिमालले थकान भुलिन्छ । यो ठाउँमा राजा वीरेन्द्र आइरहन्थे । उनले हाईप्रोफाइल खप्तड जाँदा बस्न राम्रा गेस्ट हाउस पनि बनाएका छन् । पारस सपरिवार खप्तड जाँदा सोही गेस्ट हाउसमा बस्छन् ।
८ फाल्गुन २०७५, बुधबार १५:०० मा प्रकाशित
विश्व लोभ्याउने साहसिक खेल
२०२० मा २० लाख पर्यटक ! दुई वर्षमा पर्यटक दाेब्बर बनाउन सम्भव हाेला ?
अन्तर्वार्ता50 years ago
अप्ठ्यारो बेलामा अस्वभाविक नाफा कमाउन नखोज्नुस् [अन्तर्वार्ता]
एजेण्डा50 years ago
विचार तथा ब्लग50 years ago
कभर स्टोरी50 years ago
नेकपामा उठेको राजनीतिक आँधी
कोरोनालाई हामी जित्नेछौं, आउनोस् अर्थतन्त्रको चिन्ता गरौं
भिडियो50 years ago
फिचर स्टोरी50 years ago
घुमफिर50 years ago
वाह ! मेघौली
एउटा ‘आशा’को अवसान
अमेरिका पुग्यो नेपाली रोबोट
उद्योग वाणिज्य महासंघमा चण्डी ढकालको शासन
Copyright © 2018 श्वेतपत्र